Ny Galaxy S11 dia hanana bateria lehibe kokoa | Androidsis
Samsung dia miomana amin'ny famelabelarana amin'ny volana febroary Galaxy S11. Ny avo lenta vaovao an'ny marika dia mampanantena fa hisy fiovana maro, indrindra amin'ny fakantsarin'izy ireo. Na dia tsy izy ireo ihany no fanovana hitantsika amin'ity karazana telefaona ity, satria hihatsara ihany koa ny bateria raha ampitahaina amin'ireo an'ny finday ankehitriny.
Bateria lehibe kokoa no hampiasaina amin'ireo Galaxy S11 ireo. Ity farafaharatsiny ny fampahalalana izay miorina amin'ny famoahana vaovao momba ny avo lenta manaraka avy amin'ny Samsung. Lafiny iray izay tsy isalasalana fa zava-dehibe, indrindra eo an-tampon'ny sehatra toy ity fianakavian'ny telefaona ity.
Amin'izao aloha dia tsaho, izay misy fiatraikany amin'ny maodely roa amin'ity faritra ity. Etsy andaniny, ny Galaxy S11 dia hanana bateria 4.300 mAh fahaiza-manao, fahaiza-manao mitovy amin'ny hitantsika ao amin'ny baterian'ny Galaxy Note 10+. Dingana lehibe ho an'ity telefaona ity, noho izany.
Ny maodely hafa izay efa misy angona ampy, raha ny momba ny bateria dia ny Galaxy S11e. Ny marika Koreana dia hamela antsika indray amin'ity maodely somary mora vidy ity. Ny baterinao dia hahitana fitsambikinana miharihary koa manomboka amin'ny 3.100 mAh ankehitriny mankany amin'ny 4.000 mAh. Fahaleovan-tena bebe kokoa, noho izany.
Fandrosoana lehibe izy ireo amin'ny olan'ny bateria, izay ampanantenain'ny faran'ny Samsung Galaxy S11 homena. Amin'ireo tranga roa ireo dia hitantsika amin'ireo maodely roa ireo bateria izay ho 900 mAh lehibe kokoa. Ka io dia zavatra iray izay tokony ho tsikaritra mazava amin'ny fampiasana ny fitaovana isan'andro.
Tsaho mandritra ny fotoana fohy izy ireo, izay Samsung dia tsy nanamafy na nandà. Na dia angona azo avy amin'ny sivana manan-danja maro aza izy ireo, dia tsy maintsy dinihintsika izy ireo. Ho fanampin'izay, manampy anay hanana hevitra momba izay antenaina amin'ireo Galaxy S11 ireo izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ho tonga miaraka amin'ny bateria lehibe kokoa ny Galaxy S11